Bartan internetka waxaa maal galiya Midowga Yurub. Hase ahaatee waxa ku qoran bartan internetka waxaa masuuliyadooda leh SOSCENSA oo qura kamana turjumayaan afkaarta Midowga Yurub.
Kaalin intee la eg bay SOSCENSA ka qaadan kartaa qaban qaabinta shirka uu wado Devid Cameron ee lagu wado inuu qabsoomo bilowga sanadka 2012?
Laga soo bilaabo 2008, SOSCENSA waxayku howlaneyd sidii ay wax uga qaban lahayd meeqaamyada siyaasada ayada ookaashanaysa shabakadaha xubnaha ka ah oo ay ka qeygalinaysay hannaankasiyaasada wada hadalka.
Sabti 14 Maarso, 2015
Somalia South Central Non State Actors (SOSCENSA) Daladda Jilayaasha aan dowliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya (SOSCENSA) oo ku hadleysa Afka bulshada rayidkaka Soomaaliyeed waxay ka dhiidhiyeysaa boobka ay shirkadaha Talyaaniga iyo Kenya ku hayaan Badda Soomaaliya.